Hordhac makaanikada dareeraha
Makaanikada dareeraha waa qayb ee makaanikada iyo makaanikada warbaahinta joogtada ah kuwaas oo ah culuumta ugu waaweyn tababarka injineernimada. Koorsada aan bixino waa horudhac ku saabsan makaanikada dareeraha ah, waxaa lagu bartaa qeyb ka mid ah tababarka guud ee ardayda injineerinka, sidoo kale waxay faa'iido weyn u yeelan kartaa ardayda jaamacadaha ama iskood wax u baray.
Marka la eego aasaaska makaanikada dareeraha, waxaan ku adkeysan doonnaa wax badan oo ku saabsan dastuurka isla'egyada aasaasiga ah ee socodka sida cad iyadoo la adeegsanayo mabaadi'da makaanikada iyo fiisigiska oo lagu kabo mala-awaalka asalka jireed ee dabeecadda dareeraha iyo qulqulka.
Waxaan diiradda saari doonaa macnaha jireed ee isla'egyada waxaana arki doonaa sida loogu isticmaalo kiisaska la taaban karo. The codsiyada makaanikada dareeraha ah waxay ku badan yihiin baabuurta, aeronautics, injineernimada madaniga ah, injineernimada kiimikada, hydraulics, qorshaynta isticmaalka dhulka, daawada, iwm.
Habkan ugu horreeya ee makaanikada dareeraha waxaan ku xaddidi doonaa koorsada dareeraha aan la koobi karin ee socodka joogtada ah ama maya. Dheecaannada waxaa loo tixgelin doonaa inay yihiin warbaahin joogto ah. Waan wici doonaa qayb, waa curiye mug yar oo aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay sharraxaadda xisaabta laakiin ku filan oo ku filan marka la eego molecules si loogu qeexo hawlaha joogtada ah.
Hordhac makaanikada dareeraha Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Inaad noqoto mid dhaqaale ahaan u madaxbannaan: Barnaamijka Lagom
horeKu noolaanshaha iyo helitaanka shaqo ee Faransiiska
socdaSirdoonka macmal ah… oo leh sirdoon!
Codsiga Dadweynaha ee Faallooyinka Nooca 3.2.a ee Kaydka Shuruudaha ee Bixiyeyaasha Kombuyuutarada Cloud (SecNumCloud)
Aasaaska Mashruuca 2016
Xarumaha jawaabta shilka internetka ee gobolka: samaynta qaab-dhismeedka gobollada 7
Jilida caafimaadka: adiga ayay kugu xidhan tahay!